बाबुराम, वैद्य, विप्लव र प्रचण्डबीच एकताको तयारी, देशकै ठूलो पार्टी बन्ने योजना ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बाबुराम, वैद्य, विप्लव र प्रचण्डबीच एकताको तयारी, देशकै ठूलो पार्टी बन्ने योजना !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुबीच एकताको तयारी अघि बढेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’ले विप्लव, वैद्य र बाबुरामसँग पार्टी एकताको कुरा भईरहेको बताएका हुन् ।
उनले आफूहले विप्लव, वैद्य, मोहनविक्रमलगायत नेताहरुसँग छलफल गरिरकेको र कार्याकर्ताहरुलाईसमेत उनीहरुसँग सहज सबन्ध बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले माधव नेपालको समाजवादीसँगसमेत नजिकको सम्बन्ध बनाउनसमेत उनले निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई एकताको खाका निर्माणमा लागेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।